Misy fitsipika dimy momba ny fikojakojana ny kidoro. Manantena aho fa hanampy anao tsy handany fotoana firy hidirana amin'ny alina tsara fa tsy hovesaran'ny vovoka, mikraoba, sns
FANJAKANA 1: Air your mattress every day
Every night, isika tsirairay dia very eo amin'ny rano antsasaky ny iray litatra raha mbola matory, izay mamorona tontolo mahasarika ireo vovoka ary afaka mitarika tasy. Manokatra varavarankely alohan'ny hahavoaanao ny ahitra, izay hanampy amin'ny fifehezana ny hamandoana ao amin'ny efitranonao izay hitan'ireo bitika manintona tokoa.
FANJAKANA 2: Sasao fandriana isan-kerinandro - farafaharatsiny!
Arovy ny kongona vovoka tsy hipetraka ao amin'ny kidoranao amin'ny alàlan'ny fanovana ravina sy fonony duvet farafahakeliny indray mandeha isan-kerinandro ary sasao amin'ny hafanana farany ambany 60 ° C.
Mampiasà mpiaro kidoro azo esorina amin'ny masinina mba hanakanana ny hatsembohana na tsiranoka hafa amin'ny vatana hifandray amin'ny kidoro anao. Sasao indray mandeha isam-bolana miaraka amin'ny mari-pana avo indrindra atoro ny mari-pitadiavana.
FANJAKANA 3: Vacuum your mattress regularly
Unpalatable as this may be, isan-taona eo ho eo ny sela maty maty isan-taona, ary ny sasany amin'izany dia hiafara amin'ny kidoro.
indray, ity dia afaka miasa ho toy ny andriamby ho an'ny vovoka. Arovy ny vovoka sy ny sela hoditra maty amin'ny alàlan'ny fanalana ny kidoro anao indray mandeha isam-bolana amin'ny toerana fisotroana kely, mampiasa ny firafitry ny lamba famafana ny fanadiovanao.
Ny fantsom-pandehanana manaraka ny sisin'ny kidoranao dia afaka mamporisika vovoka sy sela maty, toy ny bokotra azo atao, koa omeo fifantohana manokana ireo faritra ireo.
FANJAKANA 4: Check if you should turn your mattress80°
Check if you should turn your mattress80° and flip weekly for three months after you buy them, avy eo indray mandeha isaky ny telo na efatra volana. Mba hanampiana anao hitadidy hoe rahoviana no mamadika na mihodina ny kidoro, manorata fampahatsiahivana amin'ny kalandrie anao na manamboara fampandrenesana amin'ny findainao.
FANJAKANA 5: Act fast on spills and stains
As with most stains, ny ela intsony ianao mandoto tasy kidoro, arakaraka ny maha sarotra azy ireo ny miova.
Tags: Mividiana seza sofa, fanamboarana kidoro
Fotoana fandefasana: 2020-07-06